Ihe Anyị chọrọ ịhụ site na FIFA 22 - 【Comparison ison
Chọọ site na mmasị - Chọpụta vidiyo ị ga-ahụ n'anya na edemede dịka egwu, ntụrụndụ, akụkọ, egwuregwu na ihe ndị ọzọ. Niile site na nkasi obi nke ihe ndina gi.
Ihe anyị chọrọ ịhụ na FIFA 22
Agbanyeghị na ekwuputaghi ya n’ihu ọha, mwepụta nke FIFA 22 n’afọ a dị ka ọnwụ na ụtụ. Ememme egwuregwu bọọlụ kwa afọ na-aga n'ihu ịbụ azụmaahịa na-enye ezigbo ego maka EA, ọkachasị na-elekwasị anya na Ultimate Team egwuregwu ụdịdị.
FIFA 21 masịrị anyị site na egwuregwu egwuregwu dị egwu, ezigbo ihe ngosi na ụdị ọkpụkpọ, yana ọtụtụ ụdị egwuregwu iji mee ka ndị bọọlụ bọọlụ niile na-arụ ọrụ ọtụtụ awa.
Agbanyeghị, ọ bụghị ezigbo ahụmịhe. Ikike FIFA gosipụtara mgbe niile na ọ bụ otu nzọ ụkwụ n'ihu, ntụpụ ụkwụ abụọ azụ. FIFA 21 adịghị iche; Ọ bụ ezie na ọfụma ya na-enwu gbaa, ị nweghị ike iwepu mmetụta "mmelite kwa afọ" ahụ (ọkachasị ma ọ bụrụ na ị zụtala Editiondị mbipụta na-awụ akpata oyi n'ahụ maka mgbanwe).
Ọ bụghị ihe ijuanya na FIFA 22 kwesịrị ịmasị nke ọma. Anyị abanyela kpamkpam na ọgbọ ọhụụ nke consoles na EA nwere ohere ịme egwuregwu FIFA ọzọ kachasị mma nke anyị hụworo n'ime afọ. Nke a bụ ihe anyị chọrọ ịhụ na FIFA 22 yana recap nke asịrị ahụ ruo ugbu a.
2 FIFA 22 wepụtara ụbọchị
3 Ihe anyị ga-achọ ịhụ
4 A wider nso nke player oyiyi na egwuregwu.
5 Egwuregwu nchebe iji kwalite
6 Igwe ohuru ohuru
7 Mgbanwe na Team kachasị
Kedu ihe ọ bụ? Egwuregwu ịme egwuregwu bọl nke FIFA kwadoro, na-ewepụta kwa afọ.
Kedu mgbe m ga-egwu ya? O yikarịrị ka ọ ga-eme n'etiti etiti Septemba, belụsọ ma enwere igbu oge dịka FIFA 21 igbu oge na Ọktọba n'ihi COVID-19.
Kedu ihe m nwere ike igwu? FIFA 21 malitere na ihe niile n'okpuru Sun, yabụ maka FIFA 22 anyị na-atụ anya ka ọ bido na PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch, na PC. Na-atụ anya ụfọdụ ọdụ ụgbọ mmiri nke ụfọdụ ụdị.
FIFA 22 wepụtara ụbọchị
Onweghị ihe edobere na okwute ma, ebe ọ bụ na ekwuputeghị ọkwa egwuregwu ahụ. Ma anyị na-atụ anya na windo windo a na-ebupụta na etiti etiti ọnwa Septemba. Agbanyeghị, dị ka ntinye nke afọ gara aga, anyị kwenyere na enwere ike igbu oge n'ihi COVID-19.
Ndị na-egwu egwuregwu ga-achọkwa ịpụta ụdị mbipụta pụrụ iche. FIFA 21 nyere ndị fans ohere ịzụta mbipụta Ultimate na / ma ọ bụ Champions, na-emeghe ụbọchị atọ nke mbido egwuregwu ahụ.
Ihe anyị ga-achọ ịhụ
N’afọ ole na ole gara aga, EA ewerela FIFA “ezigbo mma”. Nyocha anyị FIFA 21 na-agba akaebe na nke a. Nke a abụghị ihe ọhụrụ maka aha egwuregwu kwa afọ, n'ezie. Otú ọ dị, n'ezie Fans na-achọ ihe ntakịrị ihe bara uru maka ọgbọ ọhụrụ nke consoles.
A wider nso nke player oyiyi na egwuregwu.
N'egwuregwu ahụ, ndị egwuregwu FIFA adịghị mgbe ha kere otu ihe ahụ. Ọ bụ ezie na ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị ọkachamara na-egwu egwuregwu nwere aha ha na egwuregwu ahụ, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole na-egwu egwuregwu ụwa na-enweta ọgwụgwọ nyocha zuru ezu. O doro anya na teknụzụ dị oke ọnụ, mana ọ bụrụ na EA nwere nkwenye nke ndị otu egwuregwu, klọb na ndị egwuregwu ha, nke a bụ ihe anyị ga-achọ ịhụ ka emepụtara n'ọdịnihu.
Otú ọ dị, ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume, anyị ga-achọ ndị egwuregwu ka ha tinye ihe yiri ha na FIFA 22. Ọ bụghị naanị ndị egwuregwu kachasị mma, ma ọ bụ ndị na-eme ka ndị zeitgeist ahụ. Nke a nwere ike ọ gaghị abụ ihe kacha mkpa EA (FIFA enweghị nsogbu na-ejupụta igbe nchekwa EA kwa afọ), mana nhọrọ buru ibu nke ndị egwuregwu nwere ike ịmata site na klọb pere mpe ga-abụ mgbakwunye nnabata nke ndị na-akwado ya.
Egwuregwu nchebe iji kwalite
Na FIFA 21, ịwakpo ma na-egbu dị egwu, na-enye ikekwe otu n'ime egwuregwu kacha sie ike anyị hụla na mpaghara a. O di nwute, nhọrọ nchebe nke egwuregwu ahụ na-ahapụ ọtụtụ ihe achọrọ. Usoro ahụ egosighi afọ gị n'oge a, ma ikekwe ị ga-atụle mmezi ihe zuru oke maka FIFA 22.
Dị ka e kwuru na nyocha anyị, iwepụ ndị mwakpo ahụ siri ike karịa ka ọ dị mkpa, ebe otu ndị na-agbachitere na-agbasi mbọ ike ijikwa otu ọkpụkpọ ọgụ. N'ihi ya, mmụba nke mmejọ kpuchiri usoro ihe nchekwa oge ochie, nke na-edugakarị na egwuregwu.
Igwe ohuru ohuru
FIFA 17 bụ egwuregwu izizi na usoro iji EA's Frostbite Engine. N'oge a, ọ na-adịtụ ogologo, na ndakpọ olileanya ndị egwuregwu nwere egwuregwu na injin ahụ afọ ndị gara aga ka dị ndụ taa. Agbanyeghị, ọgbọ ọhụụ nke consoles nwere ike iji igwe ọhụrụ maka ọrụ egwuregwu EA.
Dabere na Gfinity, EA ahọrọla ịrapara na Frostbite engine maka FIFA 21, yana egwuregwu ndị ọzọ na-adịbeghị anya dịka Mkpa maka Ọsọ Ọsọ, n'ihi ntiwapụ COVID-19. Nke a nwere ike igosi na igwe ọhụụ na-echere n'azụ ma ọ bụ opekata mpe na nkwadebe maka ọgbọ ọhụụ nke consoles. N’ele anya, igwe ohuru ga enye EA ohere imezi ihe FIFA na ọkwa a na-enwetụbeghị ụdị ya.
Mgbanwe na Team kachasị
Dị ka ọ dị kemgbe mmalite nke ọnọdụ ahụ, Ultimate Team nọ na obi FIFA 21. Ihe esemokwu microtransaction na-adọta ndị egwuregwu na sistemụ ngwugwu ya mara mma. EA abụghị onye ọhụụ na ngwongwo ngwongwo loot, ma o doro anya na nke ahụ agaghị agbanwe na FIFA 22.
FIFA Ultimate Team akatọla nke ukwuu site na ndị Fans maka itinye uche na akụkụ EA, na-eleghara usoro ndị ọzọ nwere ike ịmaliteghachi anya, dịka ọnọdụ ọrụ na klọb ọkachamara.
Akụkụ ọzọ nke esemokwu ahụ bụ uru e nyere ndị egwuregwu na-achọ imeghe obere akpa ha maka ngwugwu ọkpụkpọ ọhụrụ na-egbuke egbuke. Can nwere ike ịga nke ọma dị ka onye ọkpụkpọ na-anaghị akwụ ụgwọ ma ọ bụrụ na i ruru eru maka egwuregwu ahụ, mana maka onye na-egwu egwuregwu FIFA, enwere ọdịiche pụtara ìhè na ogo n'etiti otu azụrụ maka ezigbo ego na ndị na-abụghị.
FIFA 21 enweela ọganihu dị mma mgbe ọ bịara Ultimate Team. Ejikọtara arụmọrụ na-arụkọ ọrụ ọnụ na Ultimate Team na egwuregwu a. Agbanyeghị, nke a metụtara ahụmịhe otu ọkpụkpọ, nke nyere ụzọ ọzọ ahaghị nhata, ebe ndị otu ọkpụkpọ egwuregwu nwere ike ijikọ karịa otu ọkpụkpọ na-eme dị ka nke ha. onye mmegide.
A n'ụzọ zuru ezu raara onwe ya nye ngalaba-op mode ga-eme ebube ebe a. FIFA 21 ekweghi ka ojiji nke co-op na FUT Champions, nke dịka nyocha anyị si bụrụ ohere efu maka egwuregwu ahụ. Olileanya, FIFA 22 na-agbakwunye atụmatụ a nke a rịọrọ.